Mid ka mid ah Musharraxiinta Jubbaland oo Digniin culus u diray Senatoro ka tirsan Aqalka Sare | HalQaran.com
Mid ka mid ah Musharraxiinta Jubbaland oo Digniin culus u diray Senatoro ka tirsan Aqalka Sare
Kismaayo (Halqaran.com) – Musharax Cabdi-Naasir Seeraar ayaa waxa uu si kulul u eedeeyay Senatarada qaar inay faragelin ku hayaan doorashada Jubbaland, Kadib markii shalay Magaalada Kismaayo ay gaareen Wafdi ka socda Xildhibaanada Golaha Shacabka iyo Xildhibaanada Aqalka Sare.
Musharrax Seeraar ayaa sheegay Senatarada qaar ee gaaray Magaalada Kismaayo inay halkaasi u tageen faragelinta doorashada Maamulka Jubbaland.
Waxa uu kaga digay Senataradaasi inay raad ku yeeshaan qalqalka iyo faragelinta ay ku hayaan doorashada Maamulka Jubbaland, waxaana uu sheegay in laga haboon yahay falkaasi ay sameynayaan.
Senator Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole iyo Cumar Cabdi rashiid ayuu ku eedeeyay inay yihiin shaqsiyaadka sida tooska ah faragelinta ugu haayo arrimaha doorashooyinka Maamulka Jubbaland.
Maamulka Jubbaland ayaa hadda waxa ay ku jirtaa xaalad siyaasadeed oo adag, waxaana Guddiga doorashada ay soo hormariyeen waatigii ay dhici laheyd Doorashada Madaxweynaha Jubbaland oo jadwalka laga dhigay Maalinta Isniinta ee todobaadka soo socda.
Magaalada Kismaayo ayaa waxaa si wayn isha uga haayaa dhaq dhaqaaqeeda mucaaradka dowladda, inkastoo Axmed Madoobe uu iska adkeeyay xubno dowladda soo dirtay inay farageliyaan doorashada Jubbaland.
Musharax Cabdi-Naasir Seeraar
senetorada labada aqal